Chinese Chinese Shar-Pei Imbwa Inobereka FAQs uye Ruzivo - Inobereka
Iyo Shar-Pei inofungidzirwa kuti yakagovana mavambo akafanana neakafuka-akaputirwa Chow-Chow nekuda kwemiromo yebhuruu-nhema nemitauro, pamwe neGreat Pyrenees, sosi yemaviri dewclaws, uye Tibetan Mastiff.
Iyo AKC Yakajairwa
Nhungamiro dzePuppy Mutengi
Kwakatangira maChinese Shar-Pei anogona kuteverwa kudunhu reKun Tung uye ave nemazana emakore aripo mumatunhu ekumaodzanyemba eChina.
Idzi imbwa dzakabatsira vatenzi vavo varombo mumabasa akasiyana siyana sekufudza mombe, kuchengetedza imba nemhuri, uye vakazviratidza kuva vavhimi vanokwanisa ve 'mhuka dzesango, kazhinji nguruve dzemusango.'
Zvaitendwa munguva dzekare kuti muromo wakasviba weChow-Chow, wakafumurwa kana uchihukura, wakabatsira kudzinga mweya yakaipa. Yekutanga Shar-Pei inogona kunge yakaonekwa sekuchinja. Shar-Pei painoshandurwa inoreva 'ganda-jecha' kana 'ganda re shark.'
Iri rakasarudzika rakashata, rakasununguka, rakapfava jasi rakagonesa iyo Shar-Pei kukwikwidza kubva kune vadzivisi vayo kubata apo vachirwa mumakomba embwa. Iyo jasi, kana ikakwizwa pamusoro pezviyo, inogona kuva nehasha, ichiburitsa kupisa, kuchenesa.
Mboro yavo inotakurwa pamusoro pemusana wavo kune rimwe divi ichifumura anus. Muswe wekutanga wakagadzika muswe wakakombama wakamanikana, muswe we 'coin'. Muswe wechipiri wakagadzika wakasununguka curl, uye wechitatu unotakurwa mune arch pamusoro pemusana.
Iye Shar-Pei aine muswe wake wakanamatira wakananga kana pakati pemakumbo ake aifungidzirwa sembwende. Muswe unofanirwa kuratidza hushingi.
Ndichiri kutarisa mutumbi musoro, kana zvigunwe zvakaburitswa zvishoma izvi zvaifungidzirwa kubatsira imbwa ine chiyero zvinoenderana neyekare-nguva imbwa-inorwisa g fanciers. Dhiragoni yekuChinese inokambaira nemakumbo ake akanongedzera kumabvazuva nekumadokero yaionekwa sechiratidzo chesimba.
Nekuda kweaya mashoma maitiro ekuberekesa, mazhinji eShar-Pei ane mafambiro akashata. Imbwa ine makumbo ekumberi akatwasuka ndizvozvo.
Sezvineiwo, chero imbwa muChina inodzivirira chivakwa inonzi imbwa iri kurwa, nepo kuCanada neUnited States vanonzi imbwa dzinorinda.
Kutevera kumisikidzwa kwePeople 'Republic of China senyika yechikominisiti, huwandu hwembwa hwakatopedzwa. Dai zvisiri zvekuyedza kwaMatgo Mutemo weHong Kong, Shar-Pei angadai asiri pano nhasi.
Nekuda kwekuzvipira kwake kurudzi, vashoma Shar-Pei vakaunzwa kuUnited States muma1960 uye kutanga kwema70s. Muna 1974 vatambi veAmerica neCanada vakapindura chikumbiro chaMatgo cherubatsiro uye muna 1976 wekutanga Shar-Pei akanyoreswa.
Nheyo yenhamba yakaunzwa kubva kuHong Kong yaive yehurombo hunhu ipapo iyo Shar-Pei yatiri kuona nhasi. MunaAugust wa1991, Shar-Pei akapedza zviri pamutemo zvinodiwa kuti zvizivikanwe neAmerican Kennel Club uye akaiswa muboka risiri reMitambo.
Muna 1992 veCanada Kennel Club zvakare vakaziva zviri pamutemo uye vakarongedza Shar-Pei muboka 6, Zviitiko Zvisiri ZveMitambo. Kubva panguva iyoyo Shar-Pei akati wandei izvozvi uye ari kuramba achive CKC neAKC shasha.
Pamwe chete United States neCanada izvozvi zvinogona kuzvirumbidza pamusoro pe100,000 Shar-Pei mupasi. Rudzi rwakasiyana urwu rwunozivikanwawo neFCI, HKKC, uye CSPCGB. Iyo CSPCGB inoshanda yakazvimiririra isingagone kuwana kana simba kubva ku [Briteni] Kennel Club.
Ini ndaizotaura zvakare kuti iyo FCI inoziva iyo HKKC standard uye kwete maAKC panguva ino, maererano nemutemo wayo wakajairika wekushandisa muyero kubva munyika yekwakabva rudzi.
The Standard ndiyo chaiyo 'purani' yerudzi. Iyo inotsanangura chimiro chemuviri uye humwe hunhu hunodikanwa hwerudzi urwu rwunozivikanwa se ku mhando. Humwe hunhu, hwakadai saizi, mhando yejasi, uye kufamba, zvinovakirwa pane yekutanga (kana yazvino) basa rembwa.
Humwe hunhu hwakawedzera kushongedzerwa senge ruvara rweziso, asi zvakatorwa pamwe chete vanoisa rudzi urwu rwakaparadzaniswa nevamwe vese. Iyo Standard inotsanangura mumiriri akakodzera werudzi. Hapana imbwa yega isina kukwana, asi iyo Standard inopa yakanakira iye muberekesi kuti aedze kuenda nayo.
Nekuda kwekuchengetedzwa kwekopiraiti pamusoro pekuunganidzwa kweMatanho ese pane chero saiti imwechete inochengeta mafaqs ese, AKC Maitiro haawanzo kuverengerwa maBere faqs. Muverengi anotumirwa kumabhuku ari panoperera gwaro iri kana kuNational Breed Club kuti awane kopi yeiyo Standard.
Shar-Pei anozvipira zvakanyanya kumhuri yavo, uye sekune marudzi ese, kutanga kushamwaridzana kwakakosha. Nekuti iyo Shar-Pei inogona kuve yakasindimara uye yakati simukire kune vausingazive, puppy kindergarten uye kuteerera kwese kunofanirwa kuve kufunga kune mutsva anotarisira muridzi.
Crate kudzidzisa inzira yakanaka yekudzidzisa imbwa yako. Imbwa yako ichauya kuzofunga nezvekateti yayo senzvimbo yakachengeteka yekudzokera kwavanenge vachida imwe nguva yakanyarara.
Vazhinji Shar-Pei pasi rese vakawana mazita avo neCompanion Imbwa (CD), Companion Imbwa Yakanaka (CDX), uye Utility Imbwa (U.D.) madhigirii. Ivo vakazviratidzawo pachavo mukutevera nekutora.
Iyo Shar-Pei yakahwina akawanda ekushandura mazita uye inozivikanwa kuva ine yakanakisa gait kana yakazara trot.
Nei rurimi rwayo rwakasviba? Kune chero mamwe marudzi anewo rima rimi?
Shar-Pei anogovera hunhu uhwu hwakasarudzika nerumwe chete rumwe rudzi, iyo Chow-Chow, zvichiratidza kuti panogona kuve neakafanana tateguru.
Chii chinoitika kana Shar-Pei aine rima dema rurimi, zvinosanganiswa here?
Kana iyo Shar-Pei iine rurimi rwakaonekwa imhosva huru. Rurimi runofanirwa kuve rwebhuruu dema kunze kwekunge rakasanganiswa mune izvo rurimi rwe lavender runogamuchirwa. Rurimi rwakasimba rwepingi kusabvumirwa.
Ndeapi mavara anouya Shar-Pei?
Iyo Shar-Pei inogona kuve akati wandei mavara. Iyo jasi rinofanirwa kuve rakasimba muvara uye chero Shar-Pei ine 'flowered jasi' (yakaonekwa) kana nhema uye tan muvaravara (kureva chiGerman Mufudzi) ndiko kusabvumirwa.
Mavara anosanganisira dema, kirimu, fawn, tsvuku tsvuku, tsvuku, sable, apricot, chokoreti, Isabella, uye bhuruu. Mhino dzinogona kunge dema kana zvidhinha (pinki nematema), iine kana isina masiki matema. Shar-Pei inogona zvakare kuve neinonzi iyo 'deredza' coloration.
Zvinoreva mhuno, nzara, uye anus yeiyo imbwa yakafanana nejasi, (kureva chokoreti jasi rine chokoreti mhino, nzara, uye anus). Ese aya mavara akasiyana anogamuchirwa uye akanaka, asi jasi jira rinofanira kunge rakasimba uye rakasanganiswa zvakanaka mumuviri wese wembwa.
Idzo vana dzakanaka uye dzakakwenya! Ivo vanogara izvi makwinya here?
Kwete, mune mukuru Shar-Pei kuunyana kunosungirirwa kunyanya pahuma uye kunosvava. Nekudaro, mamwe ane akaunyana kupfuura mamwe.
Ivo vakanaka nedzimwe imbwa here? Vana? Katsi nedzimwe mhuka dzinovaraidza?
Ehe, senge mazera mazhinji kana akarerwa nevana nezvimwe zvipfuwo Shar-Pei anogona kuve nhengo ine rudo yemhuri. Puppy kireshi inzira yakanaka yekudyidzana nembwanana yako nedzimwe imbwa, vanhu, uye nharaunda isina kujairika.
Paunenge uchifunga nezveShar-Pei seyako imbwa yemhuri ita shuwa kuti iwe unoona vabereki veako anotarisira mwana. Izvi zvinokubatsira iwe kuona kuti hunhu hwepup hwako huchave hwakaita sei. 'Shar-Pei akaberekwa zvakanaka, akarerwa nemudzidzi anoziva ruzivo, kashoma, kana akambove, akambove nedambudziko neizvi mumakore gumi apfuura.
Kunyange chiri chokwadi dzimwe imbwa gumi nembiri dzakatumirwa kuUnited States dzinoumba hwaro hwerudzi urwu munyika iyi dzaive imbwa dzemumigwagwa dzine hunhu husina kunaka, vafudzi vane hana vakaita nhanho huru mukubvisa vanhu vane hukasha. '
Ichi ndicho chikonzero kushamwaridzana kana vadiki kuchikosha. Iyo Shar-Pei inobudirira pane yakawanda yekutarisisa uye nekudyidzana.
Nei Shar-Pei achinyara kana munhu achiedza kuvabata pamusoro kana kusvika nekukurumidza?
'Maziso erudzi urwu akaputirwa neganda, iro rinotadzisa kuona kwaro kwese kwese. Nekuda kweizvozvo, vane chinetso chekuona vanhu vachisvika kubva kudivi rega kusvikira vatove kumberi kwavo. Kuonekwa kwakangoerekana kwavhundutsa imbwa, izvo zvinoita kuti dzinyanye.
Paunosvikwa kubva kumberi, Shar-Pei hazviite nenzira iyi. ' Gara uchirega imbwa ichinhuwidza ruoko rwako uye mumupe nguva yake yekuzviziva newe. Kusveta inzira yembwa yekuita shamwari sezvatinoti 'Mhoro' kana kukwazisana.
Vana vadiki kunyanya vanofanirwa kudzidziswa nzira yekutaura imbwa uye mwana haafanire kusvika imbwa kunze kwekunge nevabereki vavo (muridzi) uye muridzi wembwa varipo.
Vanofungira vausingazivi here? Ivo vanoita zvakanaka vatariri?
Ehe, ivo vanofambidzana nevatorwa uye vanogadzira varindi vakanaka kwazvo. Vanodzivirira imba yavo uye vadikanwa. Ivo rudzi rwakazvimiririra, rwakanyanya kutarisana nemuridzi. “Kuwedzera pamwe nekubvisa pamamiriro ekudzidzira.
Kuzvimiririra kuri pamwe nekuti imbwa dzine chivimbo chakakodzera kushanda kure nevanovabata, asi idiki nekuti dzimwe nguva inoshandura kuomesa musoro '.
Zvirongwa zvekudzidzisa zvinofanirwa kuve zvipfupi kwete zvine simba. Shar-Pei anopindura zvakanaka kurumbidza uye kana kusimbisa chikafu semubairo wehunhu hwakanaka.
Shar-Pei anoridza here?
Ehe, Shar-Pei anoridza, vamwe kupfuura vamwe. Iyo Shar-Pei zvakare inofembedza iyo inogona kunge ichikanganiswa nekupopota. Sezvo nezvose zvakapatsanurwa-zvakatarisana nemabhuru, Bulldogs, Pugs, nezvimwewo, kuridza ngonono uye kufembedza kuenda ruoko-mu-ruoko.
Vanodurura zvakawanda here?
Kwete, kamwe chete pagore kujekesa jasi ravo rakakora rezhizha. Nguva dzose shandisa bhurosi ine bristled kana hound glove.
Vanorarama kwenguva yakareba sei?
Vanorarama kuve vangangoita makore gumi nemasere kusvika gumi nemaviri ekuberekwa asi vamwe vanozivikanwa kurarama makore gumi nemashanu kana kudarika.
Iyo Shar-Pei yakakodzera pekugara mufurati?
Hongu, asi ivo vanoda zuva nezuva kurovedza muviri zvikasadaro ivo vachatanga kunzwa vakapora-kumusoro. Izvi zvinofanirwa kusanganisira zvinopfuura kungovaburitsa kunze kuti vaite mabasa avo.
Shar-Pei akangwara here?
Shar-Pei akangwara kwazvo uye anopfuura mukudzidzisa kwekuteerera. Ivo vanokurumidza kudzidza saka kudzidziswa kunofanirwa kuve kwakasiyana kuitira kuti varambe vachifarira.
Mushure mekudya chete ndipo pavanozowana kubhururuka nekuda kwemvura kubatwa mumipendero yemhino yavo. Ah, uye zveshuwa kana vakapihwa zvinonaka zvinonaka!
Inogona here Shar-Pei kutsungirira yakanyanyisa mukushisa?
Shar-Pei haifanire kusiiwa muzuva kwenguva yakareba sezvo vachigona kupisa zvakanyanya. Mumamiriro ekunze anotonhora, Shar-Pei yakanaka asi haifanire kurarama sembwa yekunze. Rangarira kuisa Vaselina pamapadhi etsoka dzavo kuti dzidzivirire kubva pamunyu unoiswa nemamwe maguta kuitira mota.
Munyu uyu unogona kupisa mapedhi etsoka uye unorwadza zvikuru. Shar-Pei haiite zvakanaka nekunyanyisa kwemamiriro ekunze, 'nekuda kwezvinetso zvehutano zvinorarama sembwa yekunze zvinopa (kureva., Nhata kuruma dermatitis, inhalant allergies yekudyara zvinhu) uye nekuda kwekuti rudzi rwacho rwunogona kuwedzera kutapukirwa nezvirwere zvinotakurwa nemhepo zvakaita se parvo.
Kuzviparadzanisa nevamwe kwakabatana nekugara sembwa yekunze (kana yekennel) imbwa zvakare haina kubatsira kune ino muridzi-inotarisana nerudzi '.
Ndeupi maitiro akajairwa naShar-Pei?
'Shar-Pei imbwa inopenya, ine rudo inoita shamwari inotyisa yemhuka. Uye zvakare, inokwikwidza kukwikwidza mukuteerera kana kurira kweringi painodzidziswa nenzira dzakakodzera.
Iyo iri nyore kudzidziswa imba, yakasarudzika yakachena uye inoda kushomeka kushambidzika. Uye, yakagadzikana uye ine hunhu hwakavimbika kana ichirerwa nevabatsiri vane mukurumbira vane ruzivo mumageneti ”.
Kazhinji, imbwa dzine chero cheanotevera mamiriro hazvifanire kuberekwa. Iwe unoda kuve nechokwadi chekuti vabereki vembwanana iwe yaungave uchifunga vakave vakajekeswa kana kuongororwa kune chero eaya mamiriro.
Aya anotevera mamiriro ehutano haapo mune yese Shar-Pei. Uku ndiko kuiswa kumatambudziko ehutano anogona kuitika mune iri rudzi uye haina kuitirwa senge generalization
Iyo Shar-Pei ndeye 1 yemarudzi gumi nemana anogona kuve nemamiriro aya. Apa ndipo pane eyelid inotenderera ichipinda neziso, ichikwiza pamusoro pekonora nekutsamwisa ichi chimiro chisina kujeka.
Maziso ane mvura, hutachiona, kunyangwe chironda chemumota, chinogona kuitika. Kugadziriswa kwekuvhiya kunodiwa. Imbwa dzine mamiriro aya hadzifanirwe kuberekwa, sezvo chinhu chinogumburwa chiri chibodzwa.
Utachiona hweshungu hunoburitsa mahormoni ayo anodzora chiyero chemagetsi chemuviri wese. Mashoma mahormone anodzosera muviri kuti ushande pane yakaderera metabolic nhanho. Muchiitiko ichocho, imbwa dzinokora zviri nyore pane chikafu chakajairwa, dzinova nousimbe, uye dzinotonhora nyore.
Bvudzi shanduko rinonyanya kuoneka uye rinosanganisira kurasikirwa nebvudzi kubva kumicheto nekumashure, kuwedzerwa pigmentation yeganda, kuwedzera uye seborrhea (kujairika mukugadzirwa kwemasero eganda.) Yechipiri hutachiona hutachiona hweganda hwakajairika.
Nzeve dzinogona zvakare kukanganiswa, dzichizadza neakakora, yeyero zvinhu zvine mafuta izvo zvinogona kuisa imbwa kuzvirwere nzeve. Kuongororwa kweropa kunozivisa huwandu hwehutachiona uye manejimendi yehutachiona inogona kurapa mamiriro acho.
Inozivikanwa Shar-Pei Fever uye Amyloidosis
Yakakurumbira Shar-Pei fivhiri inozivikanwawo se 'Kuzvimba Hock Syndrome' (SHS) kazhinji inogona kusanganisira zvinotevera zviratidzo:
Kuzvimba kwekubatana kwe hock uye dzimwe nguva mamwe majoini anogona kukanganisika.
Dzimwe nguva kuzvimba inorwadza muromo.
Kutambudzika kwepamuviri, kurutsa, manyoka, uye kufema kushoma.
“Familial Shar-Pei Fever (FSF) chirwere cheepisodic fever. Shar-Pei nechirwere ichi ane imwe kana kupfuura mabhureki efivha isingatsanangurike, kazhinji, 103-107 degrees asi zviitiko zvisingawanzo zvinogona kuenda kumusoro. Fivha inowanzotanga kana isingasviki mwedzi gumi nesere asi dzimwe nguva kurwisa kwekutanga hakusi kusvika vakura.
Zvirwere zvefivha zvinowanzoita zvishoma nezera. Fivha yekupedzisira 24-36 maawa muzviitiko zvakawanda pasina kurapwa '. Dambudziko iri 'rinofungidzirwa kuti rinokonzerwa nekusagona kudzora immune system. Imbwa dzinotambura nedambudziko iri dziri panjodzi yekufa kubva kune chakabatana chirwere, amyloidosis.
Yakabatwa Shar-Pei ne amyloidosis ine kutadza kupaza makemikari akaburitswa muropa kana kuzvimba kuchikonzerwa nekusiyiwa kusingaenzanisike kweprotein mumuviri.
Kunyangwe isiri imbwa dzese dzine Shar-Pei fever inofa neamyloidosis, painodaro, kufa kunowanzoitika pakati pemakore matatu kusvika mashanu emakore ”.
Iyo mite, Demodex Canis, inotanga senzvimbo diki dzakaoma pamusoro, chipfuva, uye makumbo eShar-Pei. Nekuti iyo imbwa inokwenya kuti isunungure kunyanyisa kunhuwa, ganda rinova rakatsvuka uye rakasvibira rine ganda rinotarisisa nezvazvo. Bvunza chiremba wako wemhuka kuti unyore mishonga yakanyorerwa, shampoo, uye kumwe kurapwa kwakakodzera.
Yakanyanya rancid muviri hwema hunouya kubva kune yakasvibira, ine ganda, rine ropa ganda. Inogona kukonzerwa ne hypothyroidism, mbiriso hutachiona, uye kana chikafu chekudya. Aya mamiriro anofanira kutaurwa nekukasika nachiremba wemhuka uye akakodzera ma shampoos uye mishonga inogona kunyatso kurapa mamiriro aya.
Kukundwa kwakajairika. Izvi zvinogona kuitika nekuda kwekufambisa kweiyo incisors inokonzera kuwandisa. Kuburitsa pazera diki kunogona kudzivirira iyo vakuru canines kubva mukucheka mukati memukanwa wakaoma.
Yakasimba Lip Syndrome
Apa ndipo panowanda nyama yakawandisa kubva pamuromo wezasi ichivhara meno ichiomesera Shar-Pei kutsenga. Nyama yakawandisa iyi inobatawo chikafu uye inowanzo kuve yakabatana nekuwandisa.
Nekuda kweyakajairwa mhando yekudaidzira nzeve diki, izvi zvinoguma neShar-Pei kuve neakamanikana nzeve nzeve. Pfungwa dzinofanirwa kutorwa mukuchenesa nzeve zvakakwana neveteti yakatemwa nzeve mhinduro. Usashandise Q-tip kuchera pasi mumugwagwa wenzeve. Shandisa make-up pad kuti unyatsochenesa nzeve wobva warega imbwa ichizunza.
Mhuno - Stenotic Nares
Idzi imbwa dzinorovera nekuda kwenyama yakawandisa. Kana iyo imbwa isingakwanise kupfuudza mweya zviri nyore, kuvhiyiwa kushandura zvakapetwa zvemhino kunogona kudikanwa. “Mukanwa makapfava” wakareba ungangove wakonzera “kutambudzika kwekufema.”
Uku kushaya simba ndeye carpal ligaments iyo inokonzeresa kusagadzikana uye kukotamira kumberi mune diki diki dzevana. Deredza mapuroteni mwero uye kurovedza muviri pane isina-inotsvedza pamusoro. Mune zvakakomba zviitiko zvakapfava kuputira zvichave zvakarongeka.
Ndipo panotetereka nekomboti kubva muhomwe yayo. Chero Shar-Pei ane mamiriro aya haafanire kuberekwa.
Imbwa yeplasplastic ine chiuno chisina kujairika muhudyu umo femur uye acetabulum zvakasarudzika zvisizvo. Izvi zvinogona kutenderera nekuomarara kubva kune hunyoro (hunodzora) kurwadziwa kune imbwa mukutambudzika kwakadai kunofanirwa kuiswa pasi.
Ita shuwa kuti vabereki vembwanana ipi yaunofunga yave yakabviswa muHip Dysplasia kuburikidza neOrthopedic Foundation yeMhuka.
Kudzokorora / Kurutsa
“Megaesophagus uye kana diaphramatic hernias inogona kusazivikanwa kudzamara imbwa yakura zvakanyanya pavachaonekwa vakaonda kana kuonda nenyaya yekurutsa. Uku kukanganisa kwekukwiridzira pamwe kunonoka kukwirisa kwesophageal neuromuscular system.
Zvinyoro zvinyoro muimbwa diki dzinogona kuvandudzika nekudya kwakanyatsonaka. Kudya imbwa nekusimudza chikafu nenzira yekuti kusimudza imbwa kumberi kumagumo. Kuisa mbiya dzekudya pasitepisi kana maviri uye wozovabvumira imwe nguva kugaya munzvimbo imwechete zvinogona kubatsira.
“Mucin ndicho chinhu chiri muganda reShar-Pei chinokonzera kuunyana kwese. Zvakajeka uye zvine mutsindo uye zvinoita segundi mumaronda ekurwa. ” Imwe Shar-Pei ine yakawandisa yeMucin ichikonzera kuumba mabhuru akajeka paganda iro rinogona kuputika uye kubuda.
Inogona kuve inosanganisirwa neanogona kurwara uye inogona kurapwa neimwe zuva zuva steroid therapy.
Torsion / Bloat
Kuve imwe yemhando dzakawanda dzakadzika-dzakapfekwa, bloat inogona kuitika muShar-Pei. Inogona zvakare kukonzerwa nemabatiro aunoita imbwa yako. Kunyangwe yakafanana necicic mumabhiza, 'bloat uye torsion inoitika kana dumbu razvimba negasi uyezve ndokumonyanisa nekucheka iro rinopa ropa.
Pasina kupindira panguva yekuvhiya, mamiriro acho anouraya ”. Imbwa inofanira kuona chiremba wemhuka nekukurumidza sezvazvinogona.
Chisingaperi Chirwere Chirwere Chirwere
Kazhinji kuomeswa nehaga yekudya uye kana Kusingaperi kushushikana manyoka. Kazhinji inopindura kune yakasimba hypoallergenic chikafu.
Vamwe Shar-Pei vanogona kubatwa nehutachiona hunokonzerwa nechikafu, huswa, zvirimwa (zvemukati nekunze), nhata inoruma dermatitis chisimbwa chakanangana nemamiriro apo imbwa inoita ruzha runopindirana nekuita kumateza mushure mekurumwa.
Edza kuchengeta dzimba dzekugara dzembwa uye nzvimbo yekutamba senhata dzakasununguka sezvazvinogona. Zvimwe zvinorwarisa ndezve 'Inhalant allergies' izvo zvinoita kuti imbwa inanzva mapa ake, kukwenya, nekukwiza muromo wayo. 'Kubvisa chikonzero chechirwere, kushandisa chaiyo shampoo uye kupa antihistamines kana cortisone ndiwo maitiro akajairika ekurapa'.
Nguva dzose bvunza Shar-Pei murapi wemhuka anoziva kurapwa nekuchengetwa. “Pamusoro pezvo, vamwe vafudzi vanotenda kuti Shar-Pei ine immune system isina simba inoita kuti ibatwe nyore e uye kutadza kupora kubva kumavirusi anotakurwa nendege akaita separvo. Mamiriro aya anoita inoculation nenguva ”kunyanya kukosha”.
“Panyaya yegomarara, mafomu akati wandei ane huwandu hwakanyanya mukuberekana. Parizvino, CSPCA iri kuongorora nhengo dzekirabhu kuti vaone kuti ndedzipi dzakanyanya kuwanda. Kana yangove yoga, sangano reCharitable Trust rinoronga kubhadhara tsvakiridzo yakakodzera yekenza ”.
Kurwara kwechikafu kunogona kukonzera ganda nemudumbu. Rudzi urwu runofanirwa kunge riine chikafu chakaringana, chinodzivirira mahara uye chimwe chine mapuroteni mashoma, angangoita (16-21%).
Dzimwe nzira dzekutsvagisa mbishi nemashopu ezvitoro ndeyevhuru kana mbishi dzakabikwa pese paunenge uchizvimisira wega, hapana chinhu kubva kumhuri yekabichi kana hanyanisi, uye michero mizhinji yakadai semabhanana, apurikoti, maapuro, nezvimwewo dzimwe nzira dzakanaka dzekuchengetedza akatenga zvinonaka.
Hapana tafura yezvimedu nekuti isu sevanhu tinowanzo pfeka ma veggies edu ne butter, margarine, munyu, shuga, uye / kana gravy. Chero chinhu chine soya kana nyama yemombe, dhayi, kana makemikari ekuchengetedza anofarira BHA, BHT, kana Exthoxyquin inofanira kudzivirirwa.
Panzvimbo iyoyo tarisa chikafu chinochengetwa nemavitamini A, C, kana E. Chikafu chisina makemikari kazhinji chinokwana kuita musiyano mukuru muhutano hwembwa.
Iyo Shar-Pei inoda kushoma kugadziriswa. Kukwesha nebhuruki yakanaka zuva rega rega kunochengeta rakasarudzika jasi mune rakanakisa mamiriro. Kugeza kunogona kuitika apo neapo uchishandisa mvura inodziya uye shampoo yakanaka inokurudzirwa nachiremba.
Kupesana nekutenda kwakakurumbira Shar-Pei haidi kugezeswa vhiki rega rega. Uku kugara uchishamba kunoita kuti ganda riome (kuwedzere kuchenura) uye zvokonzeresa kuti jasi riite kunge rakasviba. Nekuita izvi iwe uchashambidza ese embwa easidhi mafuta kure.
Shamba imbwa chete kana iye achinhuhwa neveteti anokurudzira shampoo yezvese zvido zvekugeza. Nzara dzeShar-Pei dzinokura nekukurumidza saka kugara uchicheka kuri muhurongwa. Gara uchibata mbwanana dzako mbwanana uye mbwanana pese pese kuti zvijaire kudzora.
Nekuti iyo Shar-Pei ine nzeve diki kazhinji yekuchenesa inofanirwa. Kazhinji kamwe pasvondo kana vhiki mbiri dzese zvichienderana neimbwa yega. Shandisa donje swabs kana make-up mapedhi (ekotoni iwo) nemhinduro yenzeve kubva kuna vet.
Usashandise Q-matipi sezvo inogona kusundira iyo waxy kuvaka-up kuwedzera pasi pasi panzeve renzeve. Mushure mekunge wachenesa nzeve ngadzigunun'une uyezve gare gare dzigeze zvakawandisa. Nzeve, maziso, uye muviri wese, kazhinji, zvinofanirwa kuongororwa kazhinji kuti uve unofara, hutano Shar-Pei.
Aya angori mazano mashoma aanotarisirwa kuve muridzi weShar-Pei mwana wembwa anofanira kuziva uye kufunga kana achitsvaga imbwanana nyowani:
* Mbwanana dzinofanira kunge dziine masvondo masere ekuberekwa dzisati dzaenda kumusha mutsva. Mbwanana inoda nguva yakaringana neayo / avo marara uye amai kuitira kushamwaridzana kwakanaka kutanga.
* Vatengi vanofanira kuona vese vabereki. 'Kunyangwe zvakajairika kuti Shar-Pei azvibate nenzira yakamira kana aripo pamberi pevasingazive, kana sare kana dhamu (kana vana) havafanirwe kuzvibata nenzira inonyara kana ine hukasha.
* Vatengi vanofanirwa kutsvaga mbwanana ine chivimbo, isinganyare, ine hukasha kana kutya.
Hutano hunofanirwa kuve hwekukosha zvakanyanya kune mutsva anotarisira kuve muridzi. Hapana kuburitswa kubva mumaziso kana mumhino, chakakanganiswa kana chine potbellied dumbu, isina kugadzikana jasi, uye hapana yakashata maitiro.
* Tarisa nekennel kirabhu munharaunda yako kana usina chokwadi nezvemapepa awakapihwa, asi haufanire kukumbirwa kubhadhara mari yekuwedzera yekunyoresa mapepa embwanana yako nyowani.
Mapepa akaverengerwa mukutenga g mutengo weputi wako akasainwa madzitateguru, makopi echibvumirano chekutengesa uye vimbiso yehutano, rekodhi yakazara yehutano inosanganisira mazuva ehonye uye chitupa chechiremba chinoratidza inoculation.
“Mucherechedzi anofanirwawo kupa humbowo hwakanyorwa kuti achatora mbwanana kudzoka mukati menguva pfupi kana ikaonekwa ichirwara kana kutambura nechimwe chirema. Imbwa dzinofanirwa kuongororwa nachiremba wemhuka mukati memaawa makumi mana nemasere ekutengesa.
Imbwa dzemhando yepamusoro dzinofanira kutengeswa nekontrakiti yespay / neuter kana kunyoreswa kushoma (kureva kusarera).
* Mutengo wemhando yechipfuwo Shar-Pei, uye zvakare zvinoenderana nekwaunogara, inofanira kunge iri pakati pe '$ 300- $ 500' muUnited States uye muCanada $ 600- $ 800. Ratidza mhando inotanga pa $ 1000 uye inokwira ichibva ipapo.
Flat-yakatarisana asi inonakidza? Ndinofanira kuwana Pug?
Munda Spaniel Imbwa Inobereka Ruzivo
mazita akanakisisa embwa duku
sable refu bvudzi german shepherd
bichon frize cavalier mambo charles musanganiswa
kudzvova kwembwa asi kwete kurutsa